एकपछि अर्को घु’स्याहा का’ण्डमा मु’छिदै ओली र प्रचण्डका मान्छे: ७० करोड का’ण्ड सेलाउन नपाउँदै फेरि ८ करोड काण्ड ! – AB Sansar
December 11, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on एकपछि अर्को घु’स्याहा का’ण्डमा मु’छिदै ओली र प्रचण्डका मान्छे: ७० करोड का’ण्ड सेलाउन नपाउँदै फेरि ८ करोड काण्ड !
काठमाडौं । नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद कमानसिंह लामाको निधनसँगै एउटा विवादित लेनदेनमा नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम मुछिएको छ । पूर्वसांसद एवं पूर्वराजदूत कमानसिंह लामाको निधन भएलगत्तै प्रवक्ता श्रेष्ठ संवादमा सहभागी भिडियो तथा अडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । भिडियो तथा अडियो क्लिपमा दुई करोड रुपैयाँ लेनदेनको विषय छ । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
तर, श्रेष्ठ र लामाबीचको कुराकानीमा श्रेष्ठकी स्वकीय सचिव सुसन कर्माचार्य र लामाकी पत्नी इन्द्रमायाको नाम अगाडि आएको छ । लामा र पत्नी इन्द्रमायाबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । श्रेष्ठले दुवै ९लामापत्नी र कर्माचार्य०लाई परिवारकै सदस्यजस्तै भएकाले मिल्न सुझाब दिएका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूले विवाद मिलाउन खोजेको र अहिले चरित्र हत्या गर्ने गरी प्रचार भएको बताए ।‘कमानसिंह र म लामो समयदेखिको सहयोद्धा हौँ, एउटा हाइड्रोको सेयरको विवादमा उहाँकै अनुरोधमा मैले मध्यस्थता गर्न खोजेको हुँ । बाहिर आएको अडियो मैले पनि सुनेँ, त्यसमा केही अपात्तिजनक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म गलत छु भन्ने लाग्छ भने जोसुकैले जुनसुकै स्तरको अनुसन्धान गरे पनि हुन्छ । मेरो च रित्र ह त्या गर्न खोज्नेलाई यति भन्नुछ, कहीँनिर थोरै पनि दोषी देखिए म द ण्ड भोग्न तयार छु । कमानसिंहको मृ त्युमा सबैभन्दा दुःखी हुनेमध्ये म पनि एकजना हुँ,’ उनले नयाँ भने ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले लामाको नि’धनको दुःखद खबरबाट आफू मर्माहत भएको उल्लेख गरेका छन् ।नि’धनअगाडि लामाले फेसबुकमा लेनदेन समस्याबारे लेखेका थिए । तर, प्रवक्ता श्रेष्ठको नाम भने उल्लेख गरेका थिएनन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ । लामाले आफू म:रेको अवस्थामा इन्द्रमायालाई नआउनू भनेरसमेत फेसबुकमा लेखेका थिए । कोरोनाबाट संक्रमण भएपछि लामाले असन्तुष्टि मिश्रित स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आएका थिए । Os nepal बाट
हार्दिक बधाई : गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच हुने भयो विवाह !
‘हामी नै आधिकारीक हौं सुर्य चिन्ह दिनुस’ भन्दै जुलुस लिएर प्रचण्ड पुगे निर्वाचन आयोग !